ယူနိုက်တက် ပရိသတ် ဖြစ်ရတာ သိပ်မကောင်းတော့ဘူးလို့ ပြောရင်း ကစားသမားတွေကို ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ဖာဒီနန် - xyznews.co
ယူနိုက်တက် ပရိသတ် ဖြစ်ရတာ သိပ်မကောင်းတော့ဘူးလို့ ပြောရင်း ကစားသမားတွေကို ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ဖာဒီနန်
ပရီးမီးယားလိဂ် ထိပ်သီး မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ ဒီတစ်ပါတ် Super Sunday ရဲ့ နောက်ဆုံး ပွဲစဥ်အဖြစ် အိုးလ် ထရပ်ဖို့ဒ် ကွင်းထဲမှာ ခါးသီးပြိုင်ဖက် လီဗာပူး အသင်းကို ဧည့်ခံ ကစားခဲ့ပြီး5–0ဆိုတဲ့ ရလဒ် နဲ့ ဂိုးပြတ် ရှုံးနိမ့်သွားခဲ့ရပါတယ် ။
ဒီပွဲစဥ်ကိုတော့ ကမ္ဘာ့အနှံ့ ပရိသတ် သန်းပေါင်းများစွာ နည်းတူ ယူနိုက်တက် ဂန္တဝင် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ရီယို ဖာဒီနန် ကလည်း စောင့်ကြည့်ခဲ့ပြီး အခြားသော အသင်းရဲ့ အမာခံ ပရိသတ်တွေလိုပဲ နာကျင်မှုတွေ ခံစားရင်းနဲ့ ဝမ်းနည်း စိတ်ပျက်သွားခဲ့ရပါတယ် ။
အခုတော့ လူမှုကွန်ယက် အထက်က သူ့ရဲ့ podcast အစီအစဥ်မှာ ညီဖြစ်သူ အန်တွန် ဖာဒီနန် နဲ့ ပြောခဲ့တဲ့ အမေးအဖြေ ကဏ္ဍမှာတော့ ယူနိုက်တက် ဂန္တဝင်က အသင်းရဲ့ ကစားသမားတွေဟာ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ် ပျောက်ဆုံးနေကြပြီလို့ အထူးဝေဖန်သွားခဲ့လိုက်ပါတယ် ။
” ဒါဟာ တကယ့်ကို စိတ်ကသိကအောင့် ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ပွဲစဥ် ပါပဲ ။ မန်စီးတီး အသင်းကို6– 1 ဆိုတဲ့ ရလဒ်နဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့စဥ်တုန်းက ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် ကွင်းထဲ ရှိနေခဲ့ပါသေးတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့တွေဆီမှာ ရက်ပိုင်းအတွင်း အကောင်းဆုံး ပြန်လာရမယ်ဆိုတဲ့ ကိုယ်ပိုင် အမှတ်တံဆိပ်် တစ်ခု ရှိခဲ့ပါတယ် ”
” လက်ရှိအသင်းမှာတော့ အဲ့တာကြီးက ပြသနာတစ်ရပ် ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ ။ အသင်းသားတွေဟာ သူတို့ ဘယ်သူတွေလဲ ဆိုတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်ကို ရှာဖွေနိုင်ဖို့ ရုန်းကန်နေခဲ့ကြရပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ ဘောလုံး ကြည့်ကြတဲ့ အခါမှာလည််း ‘ ငါတို့က ဘာကောင်တွေလဲ? ‘ ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးတွေတောင် ဝင်ရောက်နေခဲ့ပါပြီ ”
” မန်နေဂျာ (ဆိုးလ်ရှား) ကရော ကစားသမားတွေဆီကို မှန်ကန်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ ​ပေးပို့နေရဲ့လား ? အကယ်လို့ နည်းပြက လိုအပ်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ပေးပို့နေခဲ့တယ် ဆိုရင် ကစားသမားတွေက ဒါကိူ လက်ခံရယူခြင်း မရှိကြဘူးလား ? ”
” မန်နေဂျာ အနေနဲ့ အောက်ခြေမှာ အဲ့ဒီလို အရာတွေကို ယူဆောင်လာရပါ့မယ် ။ အခု ကြည့်နေရတာက အသင်းဟာ အတူတကွ အရှုံးနွံထဲ နစ်နေသလို ပါပဲ ။ အခု အသင််းကို ကြည့်ရတာက ‘ သူတို့ ကောင်းမွန်တဲ့ လမ်းညွှန်မှုကို ရရှိကြရဲ့လား ? ‘ ၊ ‘ မှန်ကန်တဲ့ သတင်း အချက်အလက်တွေကို ရရှိကြရဲ့လား ‘ ဆိုပြီး တွေးစရာ ဖြစ်နေရပါပြီ ”
” ဒီပွဲပြီးရင် သူတို့အားလုံး ရှက်ရွံ့နေကြမှာ အသေအချာပါပဲ ။ သူတို့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာတွေ ထိခါးခဲ့ရပြီလေ ။ သူတို့တွေဟာ မီတင်ပွဲတွေ အကြီးကြီးတောင် လုပ်ပြီး စကားတွေ ပြောကောင်းပြောနေလောက်ကြပါပြီ ။ ဒါဟာ တကယ့်ကို စိတ်မကျေနပ်စရာ ပါပဲ ”
” အခုလို အချိန်မှာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ပရိသတ် ဖြစ်ရတာတောင် သိပ်မကောင်းတော့ပါဘူး ။ အကောင်းဆုံး အသင်းတွေတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင် အမှတ်တံဆိပ် ရှိတတ်ပါတယ် ။ သူတို့ ဘယ်သူလဲဆိုတာ သူတို့ ကောင်းကောင်း သိကြပါတယ် ” လို့ ဖာဒီနန် က ထုတ်ဖော် ပြောကြားသွားခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
Previous Article ဒဏ်ရာပြသနာကြောင့် ပရက်စ်တန် နဲ့ ပွဲကို ကစားသမား6ယောက် အထိ လွဲချော်မယ့် လီဗာပူး
Next Article နူနို တာဗာရက်စ် ရဲ့အကြီးမားဆုံး အရည်အသွေးတွေကို ထုတ်ဖော် ချီးကျူးလိုက်တဲ့ အာတီတာ